बुद्ध एयरको जहाज बालबल बच्यो, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
बुद्ध एयरको जहाज बालबल बच्यो, कसरी घट्यो घटना ?
कठमाडौं। बुद्ध एयरको जहाज ठुलो दुर्घटनाबाट बचेको छ। रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्किंदा विमानस्थलकाे उडान र अवतरण अवरुद्ध भएको छ।
भैरहवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बुद्ध एयरको जहाज धावन मार्गमा गुड्ने क्रममा टायर पड्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भैरहवा कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त जहाजमा दुई बालबालिकासहित ७० जना यात्रु थिए । अहिले टायर पड्किएको जहाज धावनमार्गमा नै छ ।सोही कारण भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण हुने जहाजलाई अरु नै विमानस्थलतर्फ डाइभर्ट गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
बुद्ध एयरले भैरहवाबाट काठमाडौं उडान नं ८५६ को जहाज विमानस्थलमा रलिङ्ककाक क्रममा टायर फ्लायटका कारण रोकिएको बताएको छ ।
ती यात्रुलाई अर्को विमानबाट काठमाडौं ल्याउन लागिएको र धावनमार्गमा रोकिएको जहाजलाई टेक्निकल टिमले चेकजाँच गरिरहेको पनि बुद्ध एयरले बताएको छ।